धरती नटेकी उभिएको 'पैताला' ~ जोगी जिन्दगी
धरती नटेकी उभिएको 'पैताला'
7:41 PM पैताला डायरी, समीक्षा No comments
धेरै-धेरै वर्षपहिले एउटा घना अरण्यको माझमा एउटा ऋषिको आश्रम थियो । आश्रमको अलिक पर केही ओरालोनेर एउटा खोल्सो थियो । दिउँसै मुटु नै चिस्याउने खालको अन्धकारको साम्राज्य फैलिएको देखा पर्ने खोल्सो । खोल्सोको एक सय मिटरको दूरीमा ऋषिका चेलाहरूको आश्रम अवस्थित थियो । नित्य निर्धारित समयावधिमा गुरुचेलाको अध्ययन-अध्यापन सुचारु हुन्थ्यो । गुरुको प्रभातकालीन एवं सन्ध्याकालीन भोजन तम्तयार पारिदिन एउटा सुनिश्चित चेला सदा सेवामा हाजिर हुन्थ्यो । समय सुमधुर पवनजस्तै बहँदै गइरहेको थियो ।
एकदिनको कुरा हो । सन्ध्या बेला । आफ्ना गुरुलाई सन्ध्याकालीन भोजन तम्तयार पारिदिएर उक्त सुनिश्चित चेला सदाझैँ आफ्नो आश्रमतिर चाँडो-चाँडो फर्किरहेको थियो । किनकि, उसलाई त्यो खोल्सोनेर बहुत डर लाग्थ्यो । खोल्सोनेर आइपुग्दा उसको मुटुको धड्कन एक्कासी बढ्न थाल्थ्यो । दिवा बेलामा दिवाकरकै उपस्थितिमा भयावह देखिने खोल्सो सन्ध्या बेलामा झन् कस्तो देखिन्थ्यो ? उसको हरेक दिनको शुभारम्भ खोल्सोको अतिबिघ्न सन्नाटामा सन्निकट डरबाट भइरहेको थियो । तर, त्यो दिन त झन् अजिबोगरिब पो भइदियो । ऊ खोल्सोमा आइपुगेको थियो, भूतसित पो उसको जम्काभेट भइगयो । उसको डरले सर्वोच्च शिखरको चुम्बन गर्यो । ऊ गर्न नै के सक्थ्यो ? ऊ स्थिर भयो ।
"म तँलाई खाऊँ ?," भूतले भूतको आवाजमा सोध्यो ।
ऊ बोल्न नै के सक्थ्यो ?
"ओइ मनुवा सुनिनस् ? म तँलाई खाऊँ ?," भूतले पुन: भूतकै आवाजमा सोध्यो ।
"हजुर ... ! म ... भो...लि य...सै बेलामा यहाँ आइपुग्छु । अ...नि खानुहोला ।," भूतको प्रश्नमा निकै भयग्रस्त भुत्ते आवाजमा उसले यत्ति बोल्न सक्यो ।
"पक्का हो ? भोलि पक्का आउँछस् नि, तँ ?"
"हजुर ! पक्का आउँछु ।"
"ल, जा आजलाई उसोभए ।" भूतले चेलालाई बाटो छोडिदियो ।
के चेला त्यो रात राम्ररी निदाउन सक्यो ?
भोलिपल्ट । भूतले उसको बाटो पुन: छेक्यो र तिनै प्रश्न गर्यो । अनि, उसले पनि तिनै जवाफ झनै डराईडराई दियो । अन्त्यमा, भूतले बाटो छाडिदियो । डरले उसको बोल्ती बन्द थियो । 'ल, आजलाई चाहिँ जा । दुईपटक भइसकेको छ । अबको तेस्रो पालिमा त म तँलाई खान्छु ,खान्छु ।' त्यो रातभर भूतको चेतावनी उसले सम्झिरह्यो ।
तेस्रो दिन । गुरुको प्रभातकालीन भोजनको बेला । आज पनि चेलाको अवस्था 'हरेक दिन रामसाइँला चिहानतिर ~ हरेक दिन एक पाइला चिहानतिर'कै थियो । मात्र त्यसमा आज पूरा मात्रा थपिएको थियो । आजभोलि उसको ध्यान न अध्ययनमा थियो, न अन्यमा । गुरुले उसको क्रियाकलाप नियालिरहेका थिए ।
"के भएको छ तँलाई, आजभोलि ? तेरो मन आजभोलि धेरै भड्किरहेको देख्दैछु । मलाई भन् ।," गुरुले सोधे ।
जसै गुरुले यो प्रश्न सोधे, चेला भक्कानियो र सम्पूर्ण घटना बेलिविस्तार लगायो ।
"तँ चिन्ता नले । यसो गर्, तेरो अनुहारभरि कालो मोसो दल् । हात चाहिँ सफा नै राख्नू । त्यो भूतले जसै 'म तँलाई खाऊँ' भन्छ, तैंले पनि 'ल ल, मलाई खा खा' भनेर त्यसको देब्रे गालामा दाहिने हातले एक थप्पड जमाएर दिनू । अनि, आश्रममा गएर आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नू ।," सबै कुरा सुनिसकेपश्चात् गुरुले सुझ्याए । चेलाको बल्ल प्राण जागृत भयो ।
त्यही दिनको साँझ चेलाले आफ्नो गुरुले भनेबमोजिम गर्यो । चेला कालो मोसो पोतिएको उसको अनुहार लिएर भूतसमक्ष पुग्यो । भूतले 'म तँलाई खाऊँ' भन्दा 'ल ल, मलाई खा खा' भन्दै भूतको देब्रे गालामा दाहिने हातले एक थप्पड जमाएर कस्यो । र, ऊ आश्रममा गएर आफ्नो अनुहार हेर्यो । उसको आफ्नो देब्रे गालामा उसकै दाहिने हातको पाँच औंलाको छाप थियो ।
नेपाली साहित्य ! अब तैँले गनेस पौडेलको 'पैताला'लाई पनि गनेस । तथाकथित तान्त्रिक उपन्यास 'पैताला'ले तँलाई भन्दैछ, 'काउन्ट मी अल्सो । मलाई पनि गनेस ।' तर, बडो विडम्बनापूर्ण कुरो, यो 'पैताला'लाई लिएर लेखकको दाबी कस्तो छ, जुन 'यो नेपाली साहित्यको 'पैताला' हो' जस्तो छ । गौतम बुद्धले भने, 'सन्देह नै ज्ञानको जननी हो ।' लेनिनले पनि त्यही भने, 'हरेक कुरामा शंका गर ।' 'पैताला'को दाबी शतप्रतिशत सन्देहास्पद, शंकास्पद र समग्रमा हास्यास्पद छ । 'पैताला'को दर्शन 'तन्त्र : विधि, मन्त्र : शब्द अथवा ध्वनि र यन्त्र : साधन अथवा ज्यामिति' को लेखनी-त्रिवेणी भनिएको छ । व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा, 'पैताला' भन्दा पूर्वका रचनामा देखा पर्ने दर्शनहरू चाहिँ उसोभए तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रले सुसज्जित थिएनन्, छैनन् ? ती रचनाहरूमा मन्त्रलाई विधिपूर्वक भनिएको नै छैन र तिनको गतिलो प्रभाव नै छैन त ? मन्त्र र यन्त्रको सहीसाँचो प्रयोग गर्ने तकनिकी तन्त्र हो । 'पैताला' मात्रै उसोभए 'तान्त्रिक' उपन्यास हो ?
'काठमाडौंको खास परिचय त पसलका सोकेसमा पो कैद हुँदो रहेछ । व्यापारीको सन्दुसमा पो काठमान्डुको मुटु लुकाइएको हुँदो रहेछ ।'
(पेज २१५, माक्सोती भन्छे : माक्सोतीको काठमान्डु यात्रा : पैताला)
नेपाली राजनीति र नेपाली साहित्यमा एउटा समानता छ । दुवैमा व्यापारी घुसेका छन् । 'पैताला' नेपाली साहित्यको बजारमा अलिकति बढी हल्ला आएको हो, व्यापार आएको हो । हल्लाकै स्वीकृति हो, 'पैताला' । कुमार नगरकोटीले 'मिस्टिका'लाई 'ब्ल्याक' फ्यान्टासीको उपमा दिएजस्तै । माथिको कथाअनुसार भनौँ, 'पैताला' कुनै 'गुरु' उपन्यास होइन, बरु त्यही 'गुरु'को त्यही सुनिश्चित चेला हो, जसले अनुहारभरि कालो मोसो दलेर भूतको देब्रे गालामा आफ्नो दाहिने हाते थप्पड प्रहार गरेको छ, तर आफ्नो अनुहार ऐनामा गएर हेरिसकेको छैन । पाठकहरू भयभीत नहुँदा हुन्छ, 'पैताला' 'भूत' हैन, 'पैताला'मा कुनै भूत छैन, बरू यो भुत्ते छ । अझ यसले त उक्त गुरुले जस्तो सही उपाय प्रदान-वरदान पनि दिँदैन । यो पुस्तकले 'मृत्युु एवं ब्रह्माण्ड सिद्धान्त'को बडो डिङ हाँक्छ, हिङ नभए तापनि हिङ बाँधेको टालो राख्छ । ढुक्क हुनुस्, 'जोस्मणि आरण्य'ले शुक्राचार्यको, कमसेकम उपन्यासभरि नै, 'सञ्जीवनी बुटी' र सो-कल्ड आख्यानकारको आकाश प्रेमको उपज 'एन्टी इलेमेन्ट : एनएचसिक्ससिवाई' पत्ता लगाउनेछैन, किनकि तर्कले मात्रै आविष्कार सम्भव छैन ।
एकजना विद्यार्थी छ । शिक्षकले एकदिन उसलाई सोध्छन् ।
'खोज र आविष्कार'को वाक्य बना त ।'
विद्यार्थीले 'खोज र आविष्कार'को वाक्य के बनाएछ, थाहा छ, 'मेरा बाबाले मेरी आमालाई 'खोज' गर्नुभयो र मलाई 'आविष्कार' गर्नुभयो' ।
नारायण वाग्लेको 'पल्पसा क्याफे'ले नेपाली साहित्यलाई 'प्रोफेसन' दियो ? 'पल्पसा क्याफे'को 'प्रोफेसनल डिमान्ड एवं भ्यालु' गुलजार भयो ? अब प्रश्न आउनेछ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 'मुनामदन', लीलबहादुर क्षेत्रीको 'बसाइँ', पारिजातको 'शिरीषको फूल', डायमनशमशेरको 'सेतो बाघ' लगायतले चाहिँ यसभन्दा अगाडि नेपाली साहित्यलाई 'प्रोफेसन' नदिएकै हुन् त ? यदि सकारात्मक जवाफी मुन्टो हल्लन्छ भने भनिदिनुपर्नेछ, 'पल्पसा क्याफे'ले नेपाली साहित्यलाई 'प्रोफेसन' दिएको हो, खलिल जिब्रानको 'प्रोफेट' दिएको होइन ।
बुद्धिसागरको 'कर्नाली ब्लुज'मा जाऔँ । नेपाली साहित्यमा 'कर्नाली ब्लुज'को सफलता भनेको 'सिचुएसनल र भाषाशैलीगत' हुन् । जुन बेला, नेपाली साहित्यमा सिमान्तकृत भाषा एवं साहित्यको कुरा हुँदै थियो । नयनराज पाण्डेको 'उलार'लाई ब्युताइँदै गरेको समयावधि थियो । तर, अराउन्ड टेक्स्ट जाने हो भने 'कर्नाली ब्लुज' वास्तविक रूपमा कर्णालीको ब्लुज होइन, बरू यो 'बा'को भरिभराउ प्रस्तुति 'बा ब्लुज' हो । अमर न्यौपानेको 'पानीको घाम'को सफलताले पनि यस्तै देखाउँछ ।
एकजना अनपढ नेपाली र उसको बिरालो अङ्ग्रेजको घरमा पुग्छन् । अङ्ग्रेजको एउटा गाई छ । अङ्ग्रेज बिहानै उठ्छ, गाई दुहुन्छ, गाईको दूध आगोमा उमालेर चुल्होनजिकै राख्छ र कतै निस्कन्छ । त्यसैबेला नेपालीको बिरालो झ्यालबाट फुत्त छिर्छ, कराईको आधा दूध पिउँछ र आधा दूध घोप्ट्याइदिन्छ, दूध चिर्लिम्मै पारिदिन्छ । जब अङ्ग्रेज उसको घरमा आएर यो सब चर्तीकला देख्यो, ऊ रिसले आगो भयो र नेपालीलाई बोलाएर सोध्यो ।
'ह्वाट इज अल दिस ? ह्वाट इज गोइङ हियर ?'
जवाफमा नेपालीले भनेछ, 'टु कान ठाडा, वान पुच्छर थिरलिङ, झ्यालबाट छिरलिङ, दूधभरि चिरलिम ।'
'मोक्षान्त : काठमान्डू फिभर', 'फोसिल', 'कोमा : अ पोलिटिकल सेक्स', 'अक्षरगञ्ज', 'घाटमान्डु', 'मिस्टिका' लगायतमा नगरकोटीले भाषाको 'ड्याम केयर' गरे, उनलाई त्यसले पनि सफल देखाइदियो । गनेस पौडेलले आफ्नो 'पैताला'मा भलै त्यो गरेका छैनन्, तर पात्रछनौट र शैलीतिर नजरअन्दाज गरौँ, उनको पुस्तकीय 'बुकिस फेलो' एक्सप्रेसन 'नगरकोटीएन इम्प्रेसन' नै हो ।
नगरकोटीको ब्ल्याक फ्यान्टासीको ब्ल्याक बिरालो तान्त्रिक 'पैताला' भएर देखा परेको छ । नगरकोटीको लेखन बढी 'एलुसिभ' छ । नगरकोटीको लेखनमा 'दर्शन-घर्षण-आकर्षण' ज्यादा छ । 'पैताला'को लेखन कुनै नयाँ/नौलो/नवीन होइन । नयनराज पाण्डेको 'घामकिरी'मा ' भर्तृहरि र पिङ्गलाको मायावी अमृत फल'को प्रसङ्ग आएजस्तै 'पैताला'मा 'शुक्राचार्यको सञ्जीवनी र एन्टी इलेमेन्ट' आउने हो, बाँकी केही होइन । सतही रूपमा नै सही, 'पैताला'लाई एउटा अर्को 'घामकिरी' भन्दा केही फरक पर्दैन ।
नगरकोटी आफूलाई 'फिक्सन डिजाइनर' भन्दछन् । के हो यो भनेको ? नेपाली साहित्यमा पाठकले भनोस्, नभनोस्, लेखक आफूले आफैँलाइ र आफ्ना सिर्जनालाई एउटा अजिबोगरिब उपमा र नाम दिन थालेका छन् । परिणामस्वरूप, पाठक रनभुल्लमा परेका छन् । लेखनाथ पौड्यालले पनि 'तरुण तपसी'लाई 'नव्यकाव्य'को नाम नदिएका त होइनन् ! कस्तो रमाइलो कुरा, लेखक स्वयंले स्वयंलाई सम्मान गर्न थालेका छन्, उपाधि दिन थालेका छन् । देवकोटाले आफूले प्राप्त गरेको 'कविशिरोमणि'को उपाधि 'लेखनाथ पौड्याल'लाई सम्मानपूर्वक दिन अह्राए । शंकर लामिछानेले 'लेखक भनेको देवता हो, देवकोटा हो' भने । तर, अब त्यो वातावरण कहाँ बाँकी रह्यो ? यही हराएको सेरोफेरोमा लेखकको स्वघोषणासहित तान्त्रिक 'पैताला' आइपुगेको छ ।
नेपाल पठनप्रवृत्तिको सम्बन्धमा एउटा सुन्दर भनाइ आइपुगेको छ : 'कुनै नयाँ लेखकको नयाँ कृति आउँदा हामी उसको ओरिजिनालिटी खोज्दैनौँ, अरूसँग उसको सिमिलारिटी खोज्छौँ ।' अब यहाँ अर्को गज्जबको प्रश्न खडा भइजानेछ । कुनै पनि लेखकको ओरिजिनालिटीको निर्धारण फेरि अन्य लेखकका कृतिसँगको दाँजो एवं तुलनाबाट नै हुने होला, कि हैन ?
नगरकोटी आफ्नो कुनै कथामा 'हरेक मोर्टल मानिसको जीवनमा इम्मोर्टल डिस्टर्वेन्सको आवश्यकता पर्दछ' भनेर लेख्दछन् । गनेस पौडेल त्यसरी नै आफ्नो पुस्तकमा भन्दछन् :
'सञ्जीवनी विद्याजस्तो अलौकिक सम्पदालाई हासिल गर्नुपूर्व जोस्मणि यस्तै अलौकिक घटनाबाट गुज्रनु जरूरी हुन्छ । एनएचसिक्ससिवाईजस्तो लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्न लौकिक घटनाबाट गुज्रनुपर्छ ।'
(पेज १५५, आख्यानकार भन्छ : भूतनाथ मन्दिरमा अघिल्लो दिन : पैताला)
नगरकोटी आफ्नो पुस्तकमा फ्रेडरिक नित्सेको भनाइ कोट गर्दछन्: 'इफ यु वान्ट टु लिभ, लिभ डेन्जरस्ली ।' गनेस पौडेल आफ्नो पुस्तकको शुभारम्भमै रुमीको भनाइलाई 'रुमाल फरर' गर्छन्: 'लिभ ह्वेर यु फियर टु लिभ ।' 'माई लभ, लभ डज नट डाई, यु ह्याभ टु किल इट ।' 'ईश्वरको मृत्युको घोषणा' गर्ने फ्रेडरिक नित्से आफ्नो मास्टरपिस 'दस स्पेक जराथुस्त्र'को एक स्थानमा लेख्दछन् : 'ओ लाइफ ! आई फियर दी नियर, आई लभ दी फार ।'
"दया देखाउने मान्छे पनि कतै कथाकार बन्छ ? मान्छेलाई दु:ख नदिई कस्तो कथा रचना गर्छौ तिमी ?"
(पेज ८०, आख्यानकार भन्छ : लिलाम : पैताला)
'पैताला' उत्तरआधुनिकताको ह्याङओभर, लीलालेखनको धङधङी हो । उत्तरआधुनिकता भन्छ, प्रत्येक सत्य इरेजरमुन्तिर स्थापित हुन्छन् । सत्यको खोज प्याजको पत्रपत्र खोल्स्याएर त्यसको केन्द्र पत्ता लगाउनुजस्तै हो । शंकर लामिछानेको 'एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन : प्याज' मा जस्तै ? 'पैताला'की अल्जाइमर्सग्रस्त न्यारेटर बुढिया 'स्त्रीका' कथा सुनाउन आख्यानकारको कोठामा आइपुग्छिन् । आख्यानको प्रमुख चरित्र जोस्मणि आरण्यले अलेक्जेन्डर वालेटको पत्र प्राप्त गरेपश्चात् थालनी हुने उसको 'शुक्राचार्यको सञ्जीवनी बुटी र एनएचसिक्ससिवाई'को खोजमूलक यात्रावृतान्त हो, यो उपन्यास । सम्पूर्ण उपन्यास, उपन्यास कम र संस्मरण अथवा नियात्रा ज्याद्रो लाग्छ । सायद 'पैताला' यात्रा गर्ने हुनाले यसो भएको होला । रारा ताल, जनकपुर, ल्होमान्थाङ लगायतको यात्रा-वर्णनले भरिपूर्ण यसलाई नियात्रा-उपन्यास भनिदिँदा केही फरक पर्नेवाला छैन । जस्तो, इन्द्रबहादुर राईको 'कठपुतलीको मन' पढ्दा हामीलाई कथा कम बेसी निबन्ध पढेको भान भइदिन्छ ।
'हरेक मान्छेका कथा निजात्मक छन् । हरेकका कथा आफ्ना लागि मूलकथा हुन् । अरूका कथा सहायक । पूर्वजको कथा तिम्रा लागि सहायक कथा भएजस्तै तिम्रो कथा पनि उसका लागि सहायक मात्रै हो । उसको जिन्दगीको हिरो ऊ आफैँ हो । तिम्रो जिन्दगीको तिमी भइहाल्यौ ।'
(पेज ९९, आख्यानकारको पत्र : पैताला)
'संसारका सबै प्रश्नको उत्तर हुँदैन । वास्तवमा सृष्टिका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तिनै हुन्, जसको उत्तर हुँदैन । ... सबैको समय समान गतिमा चल्दैन । शायद तपाईंको भन्दा चाँडै चलिरहेको छ मेरो समय ।'
(पेज २४३, माक्सोतीसँग भेट : पैताला)
'तन्यते विस्तारयते ज्ञानं अनेन् इति तन्त्रम्' (शैव सिद्धान्त)
(ज्ञानलाई यसद्वारा तानेर विस्तार गरिन्छ, यही तन्त्र हो ।)
भारतीय उपमहाद्विपको एक वैविधतापूर्ण एवं सम्पन्न परिपाटी, विविध रूपमा भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, कम्बोडिया, म्यान्मार, इण्डोनेशिया र मंगोलियामा विद्यमान तन्त्रको बहुत आदिम इतिहास छ, व्यापक परिभाषा छ, जुन गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, जसअन्तर्गत हाल विविध प्रकारका अन्त्यन्त कट्टरवादी विचारहरूदेखि लिएर धेरै उदारवादी विचारहरू आउँदछन् ।
भारतीय परम्परामा कुनै व्यवस्थित ग्रन्थ, सिद्धान्त, विधि, उपकरण, तकनिकी अथवा कार्यप्रणालीलाई पनि तन्त्र भनिन्छ ।
शब्दशास्त्रअनुसार, 'तन्' र 'त्रै' धातुको सम्मिलनबाट 'तन्त्र' बनेको हो, जसको अर्थ क्रमश: 'विस्तार' र 'रक्षा गर्नु' भन्ने हुन्छ । तन्त्रले ज्ञानको विस्तार साथसाथै यसको आचरण एवं मार्गअवलम्बन गर्नेको त्राण अथवा सुरक्षा पनि गर्दछ । 'तनोति त्रायति तन्त्र' ।
'आगमात् शिववक्त्रात् गतं च गिरिजा मुखम् ।
सम्मतं वासुदेवेन आगम: इति कथ्यते ।।'
तन्त्रशास्त्रको एउटा नाम 'अगम शास्त्र' पनि हो । वाचस्पति मिश्रका अनुसार, जुनबाट अभ्युदय (लौकिक कल्याण) र मोक्षको उपाय बुद्धिमा उत्पन्न हुन्छ, आगमन हुन्छ, त्यही 'आगम' हो, जुनमा व्यवहार पक्ष प्रमुख हुन्छ । तन्त्रका सात लक्षणहरू सृष्टि, प्रत्यय, देवार्चन, सर्वसाधन, पुरश्चरण, षट्कर्म र ध्यानलाई मानिन्छ । शास्त्रको अन्य स्वरूप 'निगम' अन्तर्गत 'वेदशास्त्र' (वेद, पुराण, उपनिषद् आदि) पर्दछ, जसमा ज्ञान, कर्म र उपासना आदिको विषयमा बताइएको छ ।
'पैताला'को सुन्दर पक्ष भनेको यसको 'सेल्फी' न्यारेसन अथवा कथावाचन हो । नगरकोटी पढेकाहरूका लागि जुन नयाँ भने होइन । तन्त्रको तात्पर्य 'तन्' को माध्यमबाट आत्माको 'त्राण' अथवा आफूबाट आफ्नै उद्वार भन्ने पनि हुन्छ । आगम शास्त्रअनुसार, गर्नु नै जान्नु हो र केही जान्नु ज्ञानको परिभाषामा आउँदैन, अटाउँदैन; जबसम्म केही गरिँदैन, साधनामा प्रवेश हुँदैन तबसम्म कुनै उत्तर या समाधान आउँदैन । सायद यसैलाई 'हार्ट इज द सिक्रेट इन्साइड द सिक्रेट' भनिन्छ ? जस्तो कतै भनिएको छ, 'सर्प विषालु हुन्छ भनेर पत्तो पाउनु सूचना हो । त्यो विषले मानिस मर्न सक्छ भनेर थाहा पाउनु ज्ञान हो । उक्त विषलाई निस्तेज पार्ने औषधीको आविष्कार गर्न सक्नु बुद्धि हो । यति सब भएर पनि सर्पसँग कहिल्यै नजिस्कनुचाहिँ विवेक हो ।'
'यी हेर, इडाको दाहिने हात छैन। मेरो देब्रे हात छैन । खासमा इडा मेरो देब्रे हात हो । म उसको दाहिने हात हुँ । ... वीर्यकुण्डमा । ठकवक भएर उभिएका मौनी बाबाको आधा हर जो सेतो थियो, त्यो इडा थिई । आधा हर जो रातो थियो, त्यो म थिएँ ।', पिङ्गलाले रहस्य उद्घाटन गर्दै भनी ।'
(पेज १९६, २०१, इडा र पिङ्गला : पैताला)
'पैताला'का चरित्रहरू समय-स्थानमा 'मल्टिपल पर्सनालिटी' बाँचेका छन् । पागौलिया उर्फ सुफी दर्विश, पूर्वज निकुञ्ज (सुरेन्द्र नेपाली), माक्सोती उर्फ समृद्धि राई, गंगाजमुना उर्फ चन्द्रकला, सूर्यकला उर्फ इडा र पिङ्गला (एउटै लोथिराका जुम्ल्याहा छोरीहरू) लगायत ती प्रत्येकसँग प्रत्येक जोडिएका छन् । रहस्यमय नम्बर '९८१६६८७७१३' समेत । जेट ली अभिनीत फिल्म 'द वन'मा जस्तै । हामी केही हदसम्म स्कार्लेट जोहान्सन अभिनीत 'लुसी'लाई पनि सम्झन सक्नेछौँ । अाइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्त, हकिङको 'समयको संक्षिप्त इतिहास' लगायतसँग यहाँ हामी साक्षात्कार हुन सक्नेछौँ । आख्यानकार ती पात्रहरूलाई एक-आपसमा जोड्न 'माइनोटरको मेज'जस्तो यस्तो भुलभुलैयाको निर्माण गर्दछन्, जस्तो हामी सञ्जीव उप्रेतीको 'घनचक्कर'मा देख्न पाउँछौँ । पाठक क्षणिक रूपमा आनन्दको सिकार त पक्कै हुन्छ । तर, जस्तो फिलिप सिड्नीका अनुसार, कविता (कला) का दुई मूलभूत कार्य : 'टु डिलाइट/इन्टरटेन' (परम)आनन्द, मनोरञ्जन) र 'टु मुभ/कन्भिन्स' । पाठक 'पैताला'देखि कन्भिन्स हुन सक्दैन ।
'आँखा चिम्लनुहोस् । आँखाले नै मान्छेले आफ्नो अवधारणा बनाउँछ । आँखाले नै मान्छेले सौन्दर्य चेतना निर्माण गर्छ । आँखाबाटै मान्छेले आधा विश्वास बनाउँछ । आँखाबाट प्राप्त विश्वास र सौन्दर्य चेतनाबाट मुक्त नभईकन मान्छे प्राकृत हुन सक्दैन । आँखा नचिम्लीकनै गरिने कुनै ध्यान देख्नुभएको छ ?'
(पेज १६८, लोथिरा : पैताला)
'पैताला' क्षणिक आनन्दको सस्पेन्सिभ शब्दजाल मात्रै हो । तन्त्रजस्तो गहन कुरालाई लिएर गरिएको एउटा मजाक ।
'तिमीलाई लागेको होला, सञ्जीवनी सेवन गरेको व्रणतुका कसरी मर्यो ? व्रणतुकालाई जुन सञ्जीवनीको सेवन गराइएको थियो, त्यो पूर्ण डोजको थिएन । त्यसैले ऊ कहिल्यै नमर्ने त भयो, तर अजम्बरी भएन । चिरञ्जीवी भएन । ऊ इमोर्टल भएन । अमोर्टल मात्रै भयो । कालगतिले कहिल्यै नमर्ने तर दुर्घटनाबाट भने सञ्जीवनीले पनि उसलाई जोगाउन सक्ने थिएन । आखिर ठीकै भयो । बाँच्दा-बाँच्दा व्रणतुका वाक्क भएको थियो ।'
(पेज ११५, न्यारेटर बूढी भन्छे : पैताला)
'पैताला' नेपाली साहित्यमा अष्टचिरञ्जीवी होइन । यो दुर्घटनाद्वारा मर्ने व्रणतुका नै हो र यसले सञ्जीवनी सेवन गरेको पनि छैन । यसले बोकेको दर्शन 'अर्ध ज्ञानम् भयङ्कारी' साबित हुनेछ । बालकृष्ण समले आफ्नो एक वियोगान्त नाटक 'अन्धवेग'मा आफ्नो एक पात्रलाई बोल्न लगाउँदछन्, 'पाप डरलाग्दो हुन्थ्यो भने कसले गर्ने थियो र, यो रहरलाग्दो पनि हुन्छ र पो !' आख्यानकारले अनावश्यक रूपमा कोहलपुरको होटल सेन्ट्रल प्लाजाको सडकनेर भेटिएकी लोथिरा र अलेक्जेन्डर वालेटको संसर्ग लगायतको बेस्कन वर्णन गरेका छन् । व्रणतुकालाई बाँच्दा-बाँच्दा वाक्क लागेजस्तै आख्यानकारलाई पनि लेख्दा-लेख्दा वाक्क लागेर हो कि, उपन्यासको अन्त्य जबर्जस्ती टुङ्गो लगाइएजस्तो छ । उपन्यासले कुनै निचोडमा पुर्‍याउने छैन । उपन्यासमा वाक्यहरू काम न काज लम्बेतान तुल्याइएका छन् । यो पुस्तक बनिबनाउ किसिमको छ । यो भन्दा त बरू गिरीशवल्लभ जोशीको 'वीरचरित्र', 'वीरसिक्का', 'अरेबियन नाइट्स : वान थाउजन्ड एण्ड वान नाइट्स' मै पाठकले इन्जोय गर्न सक्नेछन् ।
प्रथम पुस्तक 'पैताला' लेखकको 'सेफ ल्यान्डिङ' हैन, एक्सिडेन्टमा परिणत भइदिएको छ । लेख्नका लागि केही नयाँ चाहिन्छ । तर, यो पुस्तक पढ्दाखेरि के पत्ता लगाउन सकिन्छ भने, उनी पाठकका रूपमा धेरै कुराबाट, पुस्तकबाट, सिनेमाबाट प्रभावित छन् र उनी यो पुस्तक एउटा 'डायरी'जस्तो लेखेर बौद्धिक विलास गरेका छन् । 'बुद्ध र हिँडेरै नदी तर्ने भिक्षु' को प्रसङ्ग आएको छ, 'सुजाताको खीर'को सन्दर्भ आएको छ । अब्बास किरोस्तामीको सिनेमा 'टेस्ट अफ चेरी' पनि देखा परेको छ । 'लोमान्थाङ' अध्यायअन्तर्गतका वाक्यांशहरू, 'छपनी ढुङ्गाको माथिल्लो भाग ठ्याक्कै स्त्री यौनाङ्गजस्तो थियो । यही छपनीको यौनाङ्ग स्वरूपबाट भोटेपीपलको विशाल रूख पलाएको छ । प्रथम रजस्वलापछि सर्वाङ्ग नाङ्गो शरीर उत्तानो परेर घाम तापिरहेकी कुनै वृक्ष पलाएको कल्पना गर त !', पढिरहँदा किम कि दुकको 'दि आइजल' सिनेमाको लेडी-फिगर हाम्रो मानसमा आउन सक्छ । 'इडा र पिङ्गला' अन्तर्गत 'धर्महरू ~ विचारहरू ~ समाजहरू ~ देशहरू घाँस हुन्' पढ्दा जोन लेननको 'इम्याजिन'को कुरो । र, यो पुस्तक पढिरहँदा भन्न मन लागिजान्छ, 'यो पुस्तक पनि घाँस हो ।' गतिलो पाठकले गतिलो पुस्तक सिर्जना गर्न सक्ने भन्ने रहेनछ, पाठककै बौद्धिकता त्यसमा खतराको रूपमा उपस्थित हुँदो रहेछ । प्रस्तुत पुस्तक लेखकको बिल्कुल ऐकान्तिक रोमान्सजस्तो देखा पर्दछ । तान्त्रिक हैन, बरू यो तार्किकजस्तो पो देखा परिजान्छ बरिलै । लेखकलाई शिवपुरी बाबाको 'अनन्तको यात्रा र स्वधर्म'को विषयमा त पक्कै त्ज्ञान थियो नै होला ? त्यसैले यो रोबर्ट एम पिरसिगको 'झेन एण्ड दि आर्ट अफ मोटरसाइकल मेन्टेनेन्स' जस्तो छँदै छैन । निकोस काजान्तजाकिसको 'जोर्बा द ग्रीक', अथवा भनौँ, सरूभक्तको 'पागल बस्ती' जस्तो पनि हैन । कृष्ण धराबासीको 'शरणार्थी', अथवा, जगदीश घिमिरेको 'लिलाम, साबिती र अन्तर्मनको यात्रा' सँग जुधाएर पनि न कुरा अरम । घनश्याम खड्काको 'निर्वाण'लाई हर्मन हेस्सेको 'सिद्धार्थ'सँग तुलना गर्दा जति हास्यास्पद हुन जान्छ, त्यस्तै हुन जान्छ 'पैताला'लाई परमहंस योगानन्दको 'योगीको आत्मकथा'सँग तुलना गर्दा ।
'बिल्कुल मेरो कल्पनाको घर थियो त्यो । तर अलि ज्यादै ठूलो भयो यो घर । ज्यादै सुविधायुक्त भयो । धेरै सुविधा भयो भने सुविधाले नै किचिएर मरिन्छ ।'
(पेज ३४८, इबे तिङतिङ : पैताला)
कोही लेखकले भनेका छन्, 'धेरै पुस्तक पढ्दैमा कोही लेखक हुँदैन । तीनवटा पुस्तक पढ । तीसजना मानिससँग संगत गर । किनकि मानिसजस्तो गहिरो अर्को पुस्तक हुँदैन ।'
'हामी पाइताला हौं
र फगत पाइताला
टेक्ने, हिँड्ने र दगुर्ने पाइताला हौं
र फगत पाइताला ।
(पेज १६, १७, हामी : घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे : भूपी शेरचन)
गनेस पौडेलभन्दा अगाडि नै कसैले 'पैताला : कथा उत्खननको आदि अङ्ग' भनेर कसैले पत्ता लगाइसकेको छ । प्रगतिशील लेखकहरू 'भुइँ छोएर सिर्जना गर्नुपर्ने' तर्क गर्छन् ।
'देखाउँदै मेरो शिरतिर
पुनः मेरो पैतालातिर देखाउँदै
र देखाउँदै मेरो जम्मै शरीरतिर
भन्दैछ मलाई मेरो एकजना साथीले,
"तिम्रो टाउको र पैताला जोडिएको छ
तर देखाऊ कहाँ जोडिएको छ ?"
"पेटमा," मैले जवाफमा भन्छु;
जबसम्म पेट अघाउँदैन, भोको रहन्छ
तबसम्म शिर निहुरिरहन्छ
र पैताला अघि बढ्न सक्दैन ।'
के कलामा जीवन आउनैपर्छ, देखिनैपर्छ ? कलामा जीवन आउनैपर्छ, देखिनैपर्छ होइन, कलामा जीवन आउँछ नै, देखिन्छ नै । 'पैताला' जस्तो पुस्तकमा जीवन कहाँ छ ? के जीवन छैन ? हैन, 'पैताला'मा पनि जीवन छ, तर छोपिएको छ । रूखै नपाइने वन - जीवनको रूखो चित्रणको प्रस्तुति 'पैताला' लेखकको आग्रहले भरिएको छ । 'जग ठड्याउन भुलिएको छ तलबाट, गल्ती भएको छैन महल बनाएर हावामा ।' 'पैताला'को पैतालामा जीवन कुल्चिइएको छ । त्यसैले अब यो कसरी उभिन्छ, कतिञ्जेल उभिन सक्छ ?
'शोभाको लोग्ने सुकलाल गुरुङ सिङ्गापुरबाट काठमान्डु आउने भयो । सुकलाल सिङ्गापुरे लाहुरे थियो । गत साल उसको फोटोसँग शोभाको बिहे भएको थियो । गुरुङ गाउँतिर यस्तो भइरहने कुरो रहेछ । शोभा आफ्नो लाहुरे पतिबाट छुटकारा चाहन्थी । पतिदेव एयरपोर्ट नओर्लंदै ऊ आफ्नो प्रेमी (हरिश्चन्द्र उर्फ ओशोको पुस्तक 'सम्भोगबाट समाधितिर'को भक्त) सम्भोग अधिकारीसँग भाग्न चाहन्थी ।'
(पेज २१६, अनि त्यो एक दिन : माक्सोतीको काठमान्डु यात्रा : पैताला)
नेपाली पाठक आजभोलि 'शोभा' भएका छन् । जसले मर्नु न बाँच्नुको ठरठेगाना नभएका सुकलालरूपी पुस्तकको फोटोसँग विवाह गरिरहन्छन् । पछि आफ्नै प्रेमी पुस्तकसँग जान्छन् ।
भन्छन्, चरणको पूजा गर । चरणको अर्थ हुन्छ, आचरण । त्यसैले, आचरणको पूजा गर ।
सबैभन्दा सुन्दर चाल, ब्युटीफूल मुभमेन्ट केको हुन्छ, कसको हुन्छ ? बाघ । सबैभन्दा सुन्दर चाल, बाघचाल । 'पैताला' बाघ-पुस्तक होइन, जसले नेपाली साहित्यको जङ्गलमा मंगलमय राज गर्न सकोस् । बालकृष्ण समलाई कोट गरेर भनौं, यो पनि एउटा 'नियमित आकस्मिकता' हो । जुन दिन दुईगुणा रात चौगुणा हुँदैन, बरू नौ दिनमा नौलो हुनेछ र बीस दिनमा बिर्सिइनेछ । किनकि, 'पैताला'को पेट छैन ।